शेयर बजार दाेहाेराे अंकले घट्याे, ११ दशमलव ३६ विन्दुकाे गिरावट
काठमाडौँ । लगातार ओरालो लागेको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ११.३६ बिन्दुले घटेर एक हजार २५८.२७ मा पुगेको छ ।
ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.८७ बिन्दुले घटेर २६९.९७ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोवार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । कूल १७४ कम्पनीको १४ लाख ७३ हजार ८०८ कित्ता शेयर रु. ४७ करोड २५ लाख २० हजार ८११ मा खरीद बिक्री भएका छन् ।
कारोवारका आधारमा आज नेपाल बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो बैंकको प्रतिकित्ता रु. ३२४ को दरले रु. दुई करोड ९५ लाख ८० हजार ५६४ मा कारोबार भयो ।
यस्तै शिवम् सिमेन्टको प्रतिकित्ता रु. ६४६ मा रु दुई करोड ५५ लाख १६ हजार ५७८, सिद्धार्थ बैंक रु. दुई करोड ५४ लाख ६६ हजार ७६८, कृषि विकास बैंक प्रतिकित्ता रु. ४०४ मा रु. एक करोड ८१ लाख ६७ हजार ६२१ र एनआइसि एशिया बैंकको प्रतिकित्ता रु. ४५१ मा रु. एक करोड ६० लाख ९० हजार ९४० मूल्यमा शेयर खरीद बिक्री भए ।
स्टकमा आज दुई कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजना भयो । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६८ प्रतिशत शेयर लाभांश प्रदान गरेपछि प्रतिकित्ता रु. ६८१ मा मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीको औसत बजार मूल्य रु एक हजार १५ रहेको छ ।
त्यस्तै गरी कामना सेवा विकास बैंकको पनि शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बैंकले १.५० प्रतिशत शेयर लाभांश प्रदान गरेपछि प्रतिकित्ता रु. १६२ मा मूल्य समायोजन भएको हो । बैंकको औसत शेयर मूल्य रु. १६९ रहेको छ । (रासस)